China Agricultural Subsoiler Ala Loosening Machine ụlọ ọrụ na suppliers | RY AGRI
3S usoro subsoiler bụ tumadi kwesịrị ekwesị maka subsoiling na ubi nke nduku, agwa, owu na ike imebi n'elu n'ala obi tara mmiri, esighi ike ala na dị ọcha ahịhịa. Ọ nwere uru nke kemeghi omimi, dịgasị iche iche nke itinye, adaba nkwusioru na na.
Subsoiling bụ ụdị nke na tillage technology nke e dechara site na Nchikota subsoiling igwe na traktọ ike n'elu ikpo okwu. Ọ bụ usoro ịgha mkpụrụ ọhụrụ eji eji shọvel na-agagharị agagharị, mmiri na-enweghị mgbidi ma ọ bụ mma mkpuchi iji mee ka ala ghara ịchafuchaghị ala. Subsoiling bụ usoro ọrụ ugbo ọhụrụ na-ejikọ igwe ọrụ ugbo na agronomy, ọ bụkwa otu n'ime usoro ndị bụ isi nke ịchekwa ịkọ ihe. Mmetụta nke 3S subsoiler bụ mpaghara subsoiling. Ọ bụ iji shọvel shọvels atọghe ala ma ghara ịtọhapụ ala ya na etiti oge nke mpaghara atọghe. Omume ahụ egosila na ịpịgharị nkeji oge dị mma karịa nchịkọta zuru oke ma jiri ya n'ọtụtụ ebe. Ebumnuche bụ isi bụ imebi ala nke ala a kụrụ ma chekwaa mmiri.
Mba nke ụkwụ
Ọrụ nke Subsoiler
1. Akụrụngwa ahụ ga-abụrịrị ọrụ maka ọrụ, mara arụmọrụ nke igwe ahụ, ghọta usoro nke igwe na ụzọ mmezi na iji ebe ọrụ ọ bụla.
2.Họrọ ọdụ dabara adaba. Nke mbụ, ibé ahụ kwesịrị inwe mpaghara zuru oke na ọkpụrụkpụ ala kwesịrị ekwesị; nke abụọ, ọ pụrụ izere ihe mgbochi; nke atọ, mmiri mmiri kwesịrị ekwesị nke mmiri mmiri dị 15-20%.
3. Tupu ịrụ ọrụ, ga-enyocha akụkụ nke ọ bụla nke njikọ bolt, agaghị enwerịrị ihe na-atọghe, na-enyocha akụkụ ọ bụla griiz, ekwesịghị ịgbakwunye na oge; na-enyocha ọnọdụ ejiji nke akụkụ ndị ahụ mebiri emebi.
4. Tupu ịmalite ịrụ ọrụ, anyị kwesịrị ịhazi usoro ọrụ, na-arụ ọrụ nyocha nke miri emi, dozie omimi nke omimi miri emi, lelee ọnọdụ ọrụ na ogo ọrụ nke locomotive na akụkụ igwe, ma dozie ma dozie nsogbu ahụ oge ruo mgbe ọ ga-ezute ọrụ achọrọ.
Nke gara aga: Farm Mejuputa Disc koo ubi maka Ahịa
Osote: Ọrụ ugbo Rotary Tillers
Spring Tine Ripper N'ihi traktọ 3 Point Ripper F ...